Howlgalo dad AL-Shabaab lagu tuhmayo lagu soo qabqabtay oo Muqdisho laga sameeyay | Rajodoon News
Samatar	Howlgalo dad AL-Shabaab lagu tuhmayo lagu soo qabqabtay oo Muqdisho laga sameeyay
Xilli maalmihi dambe ay howlgalo amaanka lagu xaqiijinayo ay cidamada dowlada federaalka Soomaliya ay ka wadeen xafado katirsan dagmooyinka gobalka banaadir .
Howlgalka ayaa waxaa lagu soo qabqabtay dad aad u badan sida afhayeenka ciidanka booliska Soomaliya Qaasim Axmed Rooble uu u sheegay warbaahinta , isagoo tilmaamay in ay sii wadi donaan howgaladda ay habenadi danbe ka wadaan Magalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Afhayeenka Cidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay in dadaka qaarkod ay sideeyeen kadib marki ay baaritaano ay ku sameyeen isagoo intaasi ku daray in howlgaladda lagu baacsanayay dad lagu tuhunsayhaay Al-Shabaab oo xog ay ka heleen.
“ Amarka aynu ku samaynayno howgaladan amaanka la xariira waxaa si wadajir ah u soo saaray taliyaha Nabad sugida iyo taliyaha Ciidamada Boliiska”sidaasi waxaa laga soo xigtay afhayeenka ciidanka boliiska Soomaaliyeed.
Baritaanada ay samaynayaan Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa ku soo begmaya xili bishan gudaheeda lagu wado in ciidamada Boliiska ay u dabaal dagaan 71 guuradii ka soo wareegatay marki la aasaasay cidanka boliska Soomaliyeed.
ishan gudaheeda lagu wado in ciidamada Boliiska ay u dabaal dagaan 71 guuradii ka soo wareegatay marki la aasaasay cidanka boliska Soomaliyeed.
Share "Howlgalo dad AL-Shabaab lagu tuhmayo lagu soo qabqabtay oo Muqdisho laga sameeyay" via